Nagu saabsan - Suzhou Marcospa
Suzhou Marcospawaxaa la aasaasay sanadkii 2008. Takhasus gaar ah u leh soo saarista mashiinka sagxadda, sida Booqday Furimaha Dagaalka, Nadiifiyaha iyo boodhka aruuriya Waxyaabaha tayada sare leh, moodada, oo si ballaaran loogu isticmaalo noocyo kala duwan oo naqshadaha ah, ma aha oo kaliya tirada ballaaran ee suuqa iibka gudaha, laakiin sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa Yurub iyo Mareykanka.
Miiska Marcospa sannadihii la soo dhaafay wuxuu had iyo jeer u hoggaansamaa "tayada wax soo saarka si uu u noolaado, kalsoonida iyo adeegyada horumarinta" ujeeddooyin ganacsi. Waxaa ka go'an inay ku siiso alaab tayo sare leh iyo adeegyo tayo leh. Hayso xirfadle, koox maarayn naqshad u heellan, laga bilaabo naqshadeynta wax soo saarka, sameynta caaryada, wax u sameynta shirarka alaabta, dhinac kasta iyo geeddi-socodyada ayaa si adag u tijaabinaya una xakameynaya.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee wax soo saarka iyo maaraynta iyo sahaminta, Marcospa waxay dejisay nidaam maamul tayo leh oo u gaar ah. Marcospa had iyo jeer waxay hirgelisaa fikradda ah abuurista qiimaha macaamiisha ee macaamiisha alaabooyinka loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha macaamiisha kala duwan, waxayna si joogto ah u siiyaan macaamiisha xalalka iyo dhibaatooyinka farsamada. Sahamin dheeraad ah iyo hal-abuurnimo, iyo heer sare.
Waxaan ka gudubnay shahaadada nidaamka tayada leh ee ISO9001, alaabta qaarna waxay ka gudbeen shahaadada CE ee Yurub. Si loo hubiyo ikhtiraaca wax soo saarka joogtada ah iyo adeegga iibka kadib, koox naqshadeyn iyo injineero adeegga iibka ka dib ah ayaa loo tababaray inay si xirfad leh u baaraan una horumariyaan, u qaabeeyaan, una soo saaraan boodhka warshadaha iyo qalabka ka saarista boodhka. Shirkad isku dhafan qiiqa iyo maareynta boodhka, oo leh wax soo saar dhammeystiran, oo buuxin kara baahiyaha dhan walba ah ee geedi socodka wax soo saarka warshadda, isla markaana bixin kara xal guud oo dhameystiran. Wax soo saarka Maxkpa waxay la kulmaan xeerar iyo tilmaamayaal caalami ah oo nabadgelyo oo kala duwan. Badeecadaha waxaa tijaabiyey oo caddeeyey hay'ado caalami ah. Macaamiisha waxay bixiyaan dammaanad qaadka badbaadada waxsoosaarka warshadaha.
Taxanaha soosaarka hadda jira waxaa ka mid ah nadiifiyeyaasha faakiyuumka warshadaha, kuwa ururiya boodhka warshadaha, qiijiyayaasha qiiqa, nadiifiyayaasha faakiyuumka hawo-abuurka ah, naqshadeynta boodhka qalabka iyo is-beddelka rakibaadda, barnaamijyada taageeraya qalabka iyo waxyaabaha kale ee guud ee xallinta boodhka. Wax soo saarka Ingmar waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista birta, qalabka makiinadaha, soo saarida gawaarida iyo markabka, daawada iyo cuntada, dharka ka hortagga, kiimikooyinka ganaaxa, duulimaadka xawaaraha sare ee tareenka, waxyaabaha qarxa iyo waxyaabaha kale ee warshadaha sameeya!
Si diirran ayaan kuu soo dhaweynayaa oo aad u fureysaa soohdimaha isgaarsiinta. Waxaan la shaqeyneynaa lammaanahaaga ugu fiican!